China MS Plain ikpa waya ntupu factory na suppliers | Ansheng
Igwe nkịtị, nke a makwaara dị ka ígwè carbon, bụ ihe eji eme ihe nke ọma na ụlọ ọrụ waya. Ihe mejupụtara ya bu iron na obere carbon. Ewu ewu na nke ngwaahịa bụ n'ihi ya dịtụ ala costand nile iji.
Plain waya ntupu, makwaara dị ka balck ígwè ákwà .black waya ntupu .ọ mere nke ala carbon ígwè waya, n'ihi na nke dị iche iche na-akpa ákwà ụzọ .nke kewara, larịị ikpa, Dutch weave, herringbone ikpa, larịị Dutch ịkpa ákwà.
Nkịtị waya waya ntupu siri ike ma dịgide. Ọ gbara ọchịchịrị na agba ma e jiri ya tụnyere aluminom na-egbuke egbuke ma ọ bụ nchara igwe anaghị agba nchara. ọ naghị eguzogide mmebi ma ọ ga-ata nchara n'ọtụtụ ọnọdụ ikuku. Ọ bụ n'ihi nke a, mgbe ụfọdụ, a na-eji akwa nchara nchara waya eme ihe dị ka nhọrọ mkpofu.
Eji ya: larịị nchara waya ntupu na-ejikarị na filtration nke roba, plastic, mmanụ ala na grains industry.There nwere ọtụtụ ndị ọzọ na ojiji dị ka nke ọma. Ndị isi ụlọ ọrụ na-eji ntupu maka: ogwe ọkụ, windo windo, mkpuchi shaker, mkpuchi mgbidi, na oche. Ndị na-emepụta ụgbọ ala na-eji nchara nchara nchara nchara maka imi na ihe radiator, ihe ndozi mmanụ, na diski filtration. Agriculturelọ ọrụ ugbo na-eji ntanetị nchara nchara maka igwe na ndị ọrụ akụrụngwa yana nkewa na nzacha.
Kpara Typedị: Plain Weave na Dutch Weave na herringbone ikpa.
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara Waya ntupu
Osote: Kpaliri kpara waya ntupu
Nickel Waya kpaa ntupu N'ihi Battery